Meydka safiirkiii Ruushka ee Turkiga oo laga dejiyay magalada Moscow ee dalka Ruushka (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Meydka safiirkiii Ruushka ee Turkiga oo laga dejiyay magalada Moscow ee dalka Ruushka (SAWIRO)
Waxaa magaalada Moscow ee caasimada dalka Ruushka laga dejiyay meydka safiirkii Ruushka u fadhiyay dalka Turkiga Andrei Karlov oo habeen kahor lagu dilay goob sawiro lagu soo bandhigayay oo ku taala magaalada Ankara.
Dowlada Ruushka ayaa diyaarad qaas ah ku qaaday meydka safiirkooda lagu dilay dalka Turkiga ee Andrei Karlov, waxaa sidoo kale Turkiga laga qaaday xubno qoyska safiirka ka mid ahaa ay ku jireen hooyadiis iyo xaaskiisa.
Waxaa garoonka diyaaradaha Vnukovo ee magaalada Moscow kusoo dhaweeyay meydka safiirka Ruushka mas’uuliyiin katirsan dowlada dalkaasi uu ku jiro wasiirka arimaha dibada, waxaa sidoo kale soo dhaweeyay ciidamo ka tirsan Ruushka.
Xaaskii uu ka dhintay safiirka Ruushka ee la dilay ayaa ooyin afka jabsatay markii meydka diyaarada laga dajiyay, waxaa sidoo kale goobtaasi ku barooratay hooyada dhashay safiirka oo iyana la aamusin waayay.
Dhinaca kale, nin hubeysan oo ka tirsanaa booliiska Turkiga ayaa toogasho ku dilay Andrei Karlovm xilli uu khudbad ka jeedinayay goob lagu soo bandhigayay sawirada farshaxanka, wuxuuna ninkaasi tilmaamay inuu u aargudaayay dadka shacabka ah ee lagu leeynayo magaalada Xalab ee dalka Suuriya.